Kulankii wada tashiga ee Hogaamiyayaasha Soomaalida oo.....
Hogaamiyayasha Siyaasadda Soomalida ee ka qayb galaya kulanaka wada tashiga ayaa maanta mar kale dib loo dhigay.
Kulanakan wada tashiga oo lagu tala galey in uu ka furmo Safari Park hotel oo ku yaala Nairobi ayaa dib u dhigistiisa keentay iyadoon wali lagu heshiinin Hogaamiyayaasha ka qayb galaya wada tashiga gaar u baxa oo tobon maalmood ka socon doona Safari Park Hotel, shaley ayaa hogaamiyayaasha la isu geeyey hotel kaasi si ay gooni gooni isugu arkaan iyaga dhexdooda.
Beesha Caalamka iyo IGAD ayaa wali ku guulaysan in ay ka dhaadhiciyaan macanaha loogu soo darey kulanka wada tashiga Nabada soomaalida xubno ay ku sheegay in aan looga maarmin wada hadalada Nabadeynta Soomaaliya.
Hogaamiyaasha ka maqan kulankan ayaa wali soo gaarin magaalada Nairobi oo beryayahn la dhawrayey in ay yimaadaan.
kulanka ayaa lagu wadaa berrito in uu si rasmi ah u furmi doono walow aan wali la ogeyn tirada dadka ka qayb galaya kulanaka wada tashiga nabada soomaalida oo ka dhici doona safari Park Hotel muddo toban maalommod oo loogu talagaley in la gudbiyo ama laga wada hadlo si fool ka fool ah caqabada ugu weyn ee shirka oo ah ansaxinta buuga axdiga iyo dastuurka soomaalida oo la rabo in lagu dhaqo dawlada ka dhalan doonta shirkan dib u heshiisiinta Soomaalida oo 14-bilood ka socdey Kenya.